အကယ်ဒမီရရှိခဲ့တဲ့ "ရွှေကြာ" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ ပက်သတ်ပြီး မလေးရှားရုပ်ရှင်ဘုတ်အဖွဲ့ကို မြန်မာအချင်းချင်း ကုန်းချောထိုးနှက်ခံရဖူးကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဖွေးဖွေး - Cele Connections
ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ မင်းသမီးချော ဖွေးဖွေးကတော့ အသက် (၁၉) နှစ်အရွယ်ကတည်းက အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ကာ အခုဆိုရင် အနုပညာသက်တမ်း (၁၃)နှစ်ကျော်တောင်ရှိပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးက သူမရဲ့ အနုပညာသက်တမ်း (၁၃) နှစ်တာမှာ အကယ်ဒမီဆုကြီး (၃) ဆုကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ “ရွှေကြာ” ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ပက်သတ်ပြီး ဝေဖန်မှုအနည်းငယ် ခံခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ဖွေးဖွေးက သူမအကယ်ဒမီရရှိခဲ့တဲ့ “ရွှေကြာ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ ပက်သတ်ပြီး မလေးရှားရုပ်ရှင်ဘုတ်အဖွဲ့ကို မြန်မာအချင်းချင်း ထိုးနှက်ခံရဖူးကြောင်း ရင်ဖွင့်ပြောဆိုလာပါတယ်။
“ဖွေးတို့ဒီ ​လောကထဲ​ဝင်ချင်စိတ်ဖြစ်​ပေါ်​စေခဲ့တဲ့ INSPIRE လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ ဟိုး ​ဖွေးတို့ ​ရှေ့ က အနုပညာ သူရဲ​ကောင်းများ အနုပညာ အတတ်ပညာ ရှင်များအားလုံးကို ရို​သေစွာ ဂါရဝပြုပါတယ်ရှင်။ ၁၉ နှစ်သမီးထဲက အနုပညာ​လောကထဲမယ် ကြိုးစားလာတာ။ ဒီ​ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာပဲကြီးပြင်းလာတာ ဒီအရွယ် ​ရောက်ပြီ ခုမြန်မာ့ရုပ်ရှင်နှစ်တစ်ရာပြည့်မှာ တစိတ်တပိုင်း​လေး ကျွန်မ ​ဖွေး​ဖွေး လည်း ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့သည်ပေါ့။ အမှတ်တရပဲ​ပေါ့ရှင်။ ပရိတ်သတ်များက​တော့ အမြဲတမ်းအတွက် မရှိမဖြစ်​ပါ။ ဟိုနိုင်ငံ ​တွေမှာ သွား ပြိုင်လို့ ပြကြရတဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်​တွေအတွက်လဲ အမြဲအား​ပေး​နေပါတယ်။ fighting ပါ။ မှတ်မှတ်ရရ “​ဖွေး” 2019 အမျိုးသမီးဇာတ်​ဆောင်အကယ်ဒမီဆု ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတဲ့ “​ရွှေကြာ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို မ​လေးရှားမှာ သွားပြိုင်စဉ် COPY ဇာတ်လမ်း “လုံးဝ”မဟုတ်ပါပဲ မြန်မာအချင်းချင်း ပဲ email နှင့် ထိုသွား​ရောက်ယှဉ်ပြိုင်​သော မ​လေးရှားဘုတ်အဖွဲ့သို့ မမှန်ကန်​သောစာများ ​ပေးပို့ခြင်းခံရတာ​လေးလည်း အမှတ်တရပဲ​​​ပေါ့ရှင် ”
“ဟိုကလူကြီး​တွေက email နဲ့ပို့တဲ့သူကိုလဲ ပြန်ပြ​ပေမယ့် အကျယ်အကျယ် တစ်ရှက်က နှစ်ရှက်ဖြစ်မှာစိုး၍ မြန်မာပြည်မှာမရှင်း​တော့ပဲ သူတို့​​ပြောသည့် တရုတ်ကားမှ copyမဟုတ်​ကြောင်း ဆရာမ ပုညခင် ၏ “အ​ရှေ့တံခါးအဝင်”ဝတ္ထုမှာ Original ဖြစ်​ကြောင်း မ​လေးရှားဘက်ကိုသာ ​သေချာယှဉ်ပြ အမှန်ကိုရှင်းလင်းခဲ့ကြရပါသည်။ ​​ဖွေးအ​နေ​နဲ့​တော့ ကိုယ့်လူမျိုး​တွေ တိုးတက်ရင်ဘယ်သူ​ဖြစ်ဖြစ် “မြန်မာလူမျိုး” အတွက် အားပေးလက်ခုပ်တီးဖို့ အသင့်ပဲမို့ ဆက်ကြိုးစားဖို့အများကြီး ရှိ​သေး/လိုအပ်​နေ​သေးတဲ့ မြန်မာ အချင်းချင်း အစဉ် အား​ပေးမှာပါပဲရှင်။ အခု Generation Z အတွက်ဂုဏ်ယူရသလိုလဲ အခြားအခြား​သော ​ထပ်မံဖန်တီးကြမယ့် ဘယ်နယ်ပယ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အနုပညာအတက်ပညာရှင် များရဲ့ Art Works များ ကို အစဉ်တန်ဖိုးထားလျက်….ရှိ​နေပါမယ်ရှင်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်​ပေါ့ တ​စ်နေ့​နေ့ ​တော့ ဘယ်​​လောကကိုမဆို ခွဲခွာရဦးမှာပဲမလား? I will keep following my heart..🤍✨” ဆိုပြီး ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ တိုက်ခိုက်ဝေဖန်မှုတွေရှိရှိ ဖွေးဖွေးကတော့ လက်ရှိအချိန်ထိတိုင် အနုပညာလောကမှာ တောက်ပတဲ့ ကြယ်ပွင့်တစ်ပွင့်အဖြစ် ရပ်တည်နေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း ဖွေးဖွေးရဲ့ ရှေ့ဆက်လျှောက်မယ့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို အားပေးကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အကယျဒမီရရှိခဲ့တဲ့ “ရှကွော” ရုပျရှငျဇာတျကားနဲ့ ပကျသတျပွီး မလေးရှားရုပျရှငျဘုတျအဖှဲ့ကို မွနျမာအခငျြးခငျြး ကုနျးခြောထိုးနှကျခံရဖူးကွောငျး ရငျဖှငျ့လာတဲ့ ဖှေးဖှေး
ပရိသတျတှခေဈြကွတဲ့ မငျးသမီးခြော ဖှေးဖှေးကတော့ အသကျ (၁၉) နှဈအရှယျကတညျးက အနုပညာလောကထဲကို ဝငျရောကျလာခဲ့ကာ အခုဆိုရငျ အနုပညာသကျတမျး (၁၃)နှဈကြျောတောငျရှိပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖှေးဖှေးက သူမရဲ့ အနုပညာသကျတမျး (၁၃) နှဈတာမှာ အကယျဒမီဆုကွီး (၃) ဆုကို လကျဝယျပိုငျဆိုငျနိုငျခဲ့ပွီး နောကျဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ “ရှကွော” ဇာတျလမျးတှဲနဲ့ပကျသတျပွီး ဝဖေနျမှုအနညျးငယျ ခံခဲ့ရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာတော့ ဖှေးဖှေးက သူမအကယျဒမီရရှိခဲ့တဲ့ “ရှကွော” ရုပျရှငျဇာတျကားနဲ့ ပကျသတျပွီး မလေးရှားရုပျရှငျဘုတျအဖှဲ့ကို မွနျမာအခငျြးခငျြး ထိုးနှကျခံရဖူးကွောငျး ရငျဖှငျ့ပွောဆိုလာပါတယျ။
“ဖှေးတို့ဒီ လောကထဲဝငျခငျြစိတျဖွဈပျေါစခေဲ့တဲ့ INSPIRE လုပျခဲ့ကွတဲ့ ဟိုး ဖှေးတို့ ရှေ့ က အနုပညာ သူရဲကောငျးမြား အနုပညာ အတတျပညာ ရှငျမြားအားလုံးကို ရိုသစှော ဂါရဝပွုပါတယျရှငျ။ ၁၉ နှဈသမီးထဲက အနုပညာလောကထဲမယျ ကွိုးစားလာတာ။ ဒီရုပျရှငျလောကထဲမှာပဲကွီးပွငျးလာတာ ဒီအရှယျ ရောကျပွီ ခုမွနျမာ့ရုပျရှငျနှဈတဈရာပွညျ့မှာ တစိတျတပိုငျးလေး ကြှနျမ ဖှေးဖှေး လညျး ပါဝငျခှငျ့ရခဲ့သညျပေါ့။ အမှတျတရပဲပေါ့ရှငျ။ ပရိတျသတျမြားကတော့ အမွဲတမျးအတှကျ မရှိမဖွဈပါ။ ဟိုနိုငျငံ တှမှော သှား ပွိုငျလို့ ပွကွရတဲ့ မွနျမာရုပျရှငျတှအေတှကျလဲ အမွဲအားပေးနပေါတယျ။ fighting ပါ။ မှတျမှတျရရ “ဖှေး” 2019 အမြိုးသမီးဇာတျဆောငျအကယျဒမီဆု ခြီးမွှငျ့ခံခဲ့ရတဲ့ “ရှကွော” ရုပျရှငျဇာတျကားကို မလေးရှားမှာ သှားပွိုငျစဉျ COPY ဇာတျလမျး “လုံးဝ”မဟုတျပါပဲ မွနျမာအခငျြးခငျြး ပဲ email နှငျ့ ထိုသှားရောကျယှဉျပွိုငျသော မလေးရှားဘုတျအဖှဲ့သို့ မမှနျကနျသောစာမြား ပေးပို့ခွငျးခံရတာလေးလညျး အမှတျတရပဲပေါ့ရှငျ ”
“ဟိုကလူကွီးတှကေ email နဲ့ပို့တဲ့သူကိုလဲ ပွနျပွပမေယျ့ အကယျြအကယျြ တဈရှကျက နှဈရှကျဖွဈမှာစိုး၍ မွနျမာပွညျမှာမရှငျးတော့ပဲ သူတို့ပွောသညျ့ တရုတျကားမှ copyမဟုတျကွောငျး ဆရာမ ပုညခငျ ၏ “အရှတေံ့ခါးအဝငျ”ဝတ်ထုမှာ Original ဖွဈကွောငျး မလေးရှားဘကျကိုသာ သခြောယှဉျပွ အမှနျကိုရှငျးလငျးခဲ့ကွရပါသညျ။ ဖှေးအနနေဲ့တော့ ကိုယျ့လူမြိုးတှေ တိုးတကျရငျဘယျသူဖွဈဖွဈ “မွနျမာလူမြိုး” အတှကျ အားပေးလကျခုပျတီးဖို့ အသငျ့ပဲမို့ ဆကျကွိုးစားဖို့အမြားကွီး ရှိသေး/လိုအပျနသေေးတဲ့ မွနျမာ အခငျြးခငျြး အစဉျ အားပေးမှာပါပဲရှငျ။ အခု Generation Z အတှကျဂုဏျယူရသလိုလဲ အခွားအခွားသော ထပျမံဖနျတီးကွမယျ့ ဘယျနယျပယျကပဲဖွဈဖွဈအနုပညာအတကျပညာရှငျ မြားရဲ့ Art Works မြား ကို အစဉျတနျဖိုးထားလကျြ….ရှိနပေါမယျရှငျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈပေါ့ တဈနနေ့ေ့ တော့ ဘယျလောကကိုမဆို ခှဲခှာရဦးမှာပဲမလား? I will keep following my heart..🤍✨” ဆိုပွီး ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။
ဘယျလိုပဲ တိုကျခိုကျဝဖေနျမှုတှရှေိရှိ ဖှေးဖှေးကတော့ လကျရှိအခြိနျထိတိုငျ အနုပညာလောကမှာ တောကျပတဲ့ ကွယျပှငျ့တဈပှငျ့အဖွဈ ရပျတညျနဆေဲပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးကလညျး ဖှေးဖှေးရဲ့ ရှဆေ့ကျလြှောကျမယျ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေို အားပေးကွပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ကြင်စဦးဘဝမှာ ဇနီးသည်နဲ့အတူတူအချိန်တွေအများကြီးရှိချင်တာကြောင့်ချစ်ဇနီးရဲ့အလုပ်ရှေ့မှာတင် သွားစောင့်နေခဲ့တဲ့ နိုင်းဝမ်း